Fahamaizana taratasim-panadinana tao amin'ny ENMG - Ao anatin'ny lisitr'ireo voasaringotra ny ministra taloha RASOLO Elise - Ao Raha du du 16 mars 2019 - Madagascar : la corruption au sein de la Justice illustrée par les articles de presse
Accueil Ecole nationale de la Magistrature et des Greffes de Madagascar Fahamaizana taratasim-panadinana tao amin’ny ENMG – Ao anatin’ny lisitr’ireo voasaringotra ny ministra...
Ao anatin’ny lisitr’ireo voasaringotra ny minisitra teo aloha sy ilay tale jeneraly
Mipoitra tsikelikely ireo raharaha nafana teo aloha. Taorian ‘ny raharaha « villa Elizabeth » dia niakatra Fitsarana manokana misahana ny kolikoly (PAC) ilay fahamaizan’ireo antontan- taratasy samihafa nogiazana hatao porofo momba ny fisiana kolikoly tamin’ny fanadinam-panjakana hidirana ao amin’ny sekolim-pirenena fanofanana mpitsara sy mpiraki-draharaha (ENMG) etsy Tsaralalàna. Voalaza fa isan’ireo voasaringotra ao anatin’ny raharaha ny minisitry ny Fitsarana teo aloha sy ny tale jeneralin’ ny ENMG izay nitana toerana tamin’ny voalohandohan’ ny taona 2018.
Nampanantsoina natao famotorana voalohany teny amin’ny PAC kosa, omaly, ny tampon’ andraikitra misahana ny fanaraha-maso ny raharaha ankapobeny eo anivon’ity sekoly ity. Tapaka, taorian’ izany, fa isan’ireo arahi-maso akaiky amin’izao raharaha izao io tompon’andraikitra io.
Mbola miankina amin’ izay fanapahan-kevitr’ireo mpikambana ao anatin’ny PAC indray ny fampiakarana an’iry minisitra iry eo anivon’ilay Fitsarana mitsara an’ireo mpitondra ambony (HCJ). «Mbola miandry ny fahazoan-dalana avy amin’ny filankevitra ambonin ‘ny mpitsara (CSM) kosa ny fahafahan’ny PAC miantso sy manao famotorana an’ ilay tale jeneraly teo aloha », hoy ny loharanom-baovao akaiky ny raharaha.
Ny andron’ny 8 marsa 2018 no nosokafana indray io efitrano io, ary voalaza fa isan’ireo voasaringotra tamin’izany ny minisitra teo aloha sy ilay tale jeneraly. Taorian’ izay fanokafana ny efitrano izay dia nodorana avokoa ireo antontan­ taratasy ireo. Voalaza fa nahatonga fahasarotana teo amin’ny fanadihadiana tokony nataon’ny Bianco izany fahamaizana porofo izany, ka nahatonga an’izao fampiakarana ny raharaha teo anivon’ny PAC izao.
Article précédentIncendie des copies à l’ENMG par l’ancien ministre RASOLO Elise – Le dossier déféré au Pôle anti-corruption – La vérité du 15 mars 2019
Article suivantRASOLO Elise Ministra teo aloha dia voarohirohy aminy fandorana dosie tao amin(ny ENMG – Taratra du 16 mars 2019